Masjidkii ugu horeyey Iswedhen oo adaan loo ogalaadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masjidkii ugu horeyey Iswedhen oo adaan loo ogalaadey
La daabacay fredag 1 mars 2013 kl 14.19
Dood dheer oo mudo hal sanno soo socotey ka bacdii degmada Botkyrka ayaa u ogalaatey masjidka Fittja adinka salaada. Laakiin arinta ayaa weli dhamaanin. Hada go’aanka in ay garaan adaamka waxay hoos taalaan booliska. Varg Gyllander oo booliska Stockholm u qaabilsan saxaafada ayaa sheegey arinta salka ku heyso nidaamka iyo kalo danbeyta.
- Hadii waraaqaha ku saabsan arintaan naga soo gaaran ururka dhaqadmeedyada. Booliska Stockholm hal arin ayaa markaas u taaalo in ay ka baaran degaan waana arimaha la xiriira trafikada iyo amniga iyo kalo denbeynta. Arimahaas ayaa aas,aas u ah markaan go’aan ka gaareyno codsiyada noocaan oo kale ah marka naloo soo gudubsado, ayuu yeri.
Waxay aheyd bishii januari markii ururka Islamiska kulturföreningen ee Botkyrka uu dalbadey in loo ogalaado in adin ay ka sii daayaan masjidkooda ku yaala xaafada Fitja. Adinkaas oo la siideynayo kaliya maalmaha jimcaha ah keliya taas oo aan qaadan doonin wax ka badan 2-3 daqiiqo. Hindisaha ururkaan ayaa waxaa marar badan looga faaloodey kulanada maamulka degmada,taas oo maamulka degmada ogalaadey khamiistii nasoo dhaaftey. Laakiin inta aan laga siideyn masjidka adin waa in ay booliska laga heystaa ogalaansho madaama adinkaan yahay mdi soo nqonoqonaya oo laga maqlayo. Jens Sjöström oo katirsan xisbiga socialdemokrterna ahna gudoomiye ku xigeenka degmada Botkyrka ayaa sharaxaha waxasan degmada keliya go’aankaan u gaari karin.
- Waa arin ku saabsan kalo denbeyta iyo amniga oo la mid ah in ogalaanshu lasiiyo kulan ka dhaca barxadaha dadweynaha , sida xafladaha iyo waxyaabaha keli ee lagu qabto meelaha dadka ka wada dhaxeysey oo ay cod ka soo baxdo. Saas darteed arintaan ma ahan arin maamulka degmada keliya u taala. Waana muhiim hadii aan dooneyno in arintaan noqotio mid hirgel ah oo waarta in aan meesha ka saaro in laga dacwooda oo racfaan laga qaatoama fikrado kale oo sax aheyn laga qabo ayuu yeri.
Booliska ayaa hada go’aanka uu arintaan ka gaarayo ku saleyn doona hadii codka adinka uu dadka dhibi karo ama amniga qatar ku noqon karo. Sida uu Varg Gyllanderna sheegey wey adagtahay in horey loo sii saadaaliyo go’aanka uu booliska arintaan ka qaadan doona madaama wax lamid uusan weligiis boolsiak goaan ka gaarin. Lakiin Jens sjöström gudoomiye ku xigeenkadegmada Botkyrka ayaa rajeynaya go’aan wanaagsan.
- Sidaan u arko waxay u muuuqataan arintaan la ogalaansho heleyso. Booliska go’aankiisa markasta waxuu ku saleeyaa inta baaxada codka banaanka u baxa yahay. Ma u maleynayo in booliska arintaan ka hor-i-maanayo. Laakiin waan xusmeyneynaa go’aan kasta oo booliska gaaro ayuu yeri.
Hadii arintaan ay haah ka hesho booliska, masjidka waxaa adinka laga bilaabi doonaa bisha april.